၂၀၁၉ ရဲ့ ရန်ကုန်အဆုံး
By Htet Wai Aung - July 27, 2019
ဒီနေ့တွေဟာ ၂၀၁၉ အတွက် ရန်ကုန်မှာ နေရတဲ့ နောက်ဆုံးရက်တွေပဲ။ ဖျားနေတာရော စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းတာရော ဘာတွေမှန်းမသိအောင် အလုပ်တွေရှုပ်နေတာရော ပေါင်းပြီး လူက ဘာလုပ်ရမယ် မှန်း ကို မသိတော့တာ။ စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ Facebook ကိုပါ log out လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ လူက ဖျားနေတော့ နားမှ သက်သာမယ် ဆိုတာ သိပေမယ့် မလုပ်လို့ မရတဲ့ အလုပ်တွေက ရှိနေပြန်တော့ ဖျားပေမယ့်လည်း လုပ်နေရပြန်ရော။ အဲ့တာနဲ့ ဖျားတာလည်း သက်သာလာတယ်ကို မရှိဘူး။ အရင်လို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မနေ‌ တော့တဲ့ အကျိုးဆက်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေရင် ဘာကူလုပ်ပေးပါဦး ညာကူလုပ်ပေးပါဦးနဲ့ ့အကုန်ဝိုင်းလုပ်ပေးတော့ မြန်မြန် ပြီးတာပေါ့။ ရန်ကုန်ကလည်း သိတဲ့အတိုင်း တနေရာနဲ့ တနေရာ သွားရတာ မလွယ်လှဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းတော့ တရက်ကို taxi ခ သုံးသောင်းနီးပါးကျနေတယ်။ ဘတ်စ်ကားကျတော့လည်း အချိန် တအားကုန်တယ်။ တနေကုန်မှ ၂ နေရာ လောက်ပဲ သွားလို့ရတယ်။ အချိန်သည် ငွေ ဆိုတာ အဲ့တာကို ပြောတာနေမှာ လို့တောင် တွေးမိလိုက်သေးတယ်။ စာရေးရတာ ပျင်းတဲ့ ကိုယ်ဟာ ခုတလောဆို စာပဲ ရေးချင်စိတ်ပေါက်နေတော့တယ်။ ဒီစာတွေတောင် taxi ပေါ် ရောက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ရေးနေဖြစ်တာ သာကြည့်တော့။ ဖြစ်တာက ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ပြေ
By Htet Wai Aung - July 26, 2019
Frozen Keyboard က အရင် ယူနီကုဒ်ဗားရှင်း ထွက်ပြီးသားပါ။ အခုက Dev ပြောင်းသွားတာလားတော့ မသိဘူး။ အကုန် အသစ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ ထားလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အခု အသစ်မှာတော့ ယူနီကုဒ်အတွက် support ပေးလာပါပြီ။ သူတို့ Facebook page မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း ပြန်ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 🔥🔥 Hot Update - 3.4 🔥🔥 (ကျေးဇူးပြု၍ စာဆုံးတဲ့အထိဖတ်ပေးပါခင်ဗျာ။) အောက်တိုဘာ ၁ရက်နေ့ကစပြီး Mobile ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာအကုန်လုံးမှာ Unicode Font, Unicode လက်ကွက်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထားဖြင့် ပြောင်းလဲဖို့ အစိုးရအနေဖြင့် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ 🇲🇲 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူငယ်နည်းပညာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ Frozen Keyboard အဖွဲ့ မှလဲ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ လူထုအကျိုးပြုဖို့ အတွက် Mobile Phone မြန်မာစာလက်ကွက်နေရာမှာ Unicode သုံးစွဲရလွယ်ကူအောင်၊ အလွယ်တကူကူးပြောင်းနိုင်အောင် အချိန်ယူပြီး ယခု version ကို ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 🇲🇲 🤔🤔 ဘာတွေ ထူးခြားလာပြီလဲ ??? 🤔🤔 1. Zawgyi Unicode Converter ပါလာပါပြီ။ -------------------------------------- 👉 Feature ဖွင့်ရန် - Frozen Keyboard > Setting >
Facebook နဲ့ Unicode migration
By Htet Wai Aung - July 22, 2019
ဒီနေ့ Facebook နဲ့ တွေ့တဲ့ပွဲမှာ ကိုယ်ပြောမယ် လုပ်ထားတာတွေကို တခြားသူတွေ ပြောသွားတာနဲ့ ဘာမှတောင် မပြောလိုက်ရပါဘူး။ auto detect လုပ်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားစာတွေ ကို detect လုပ်မိပြီး ဂဂျောင်တွေပြနေတာ ကို ကိုရာဗီနဲ့ မ Shwun Mi က ပြောသွားပါတယ်။ Facebook and messenger app တွေအတွက် auto convert ကို android အတွက် release လုပ်တာ 50% လောက်ပဲ သူတို့ပေးထားပါတယ်ပြောတယ်။ ဆိုလိုချင်တာ လူတိုင်း account တိုင်း မရသေးဘူးပေါ့။ အဲ့တော့ auto convert မရတဲ့သူတွေ၊ ရအောင် လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော် ရအောင် ပြောပေးကြည့်ပါမယ်။ Facebook က Myanmar Unicode Area group မှာ ပိုစ့်တင်ပြီးတော့လည်း မေးလို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး နိူင်ငံခြားကလူတွေ auto convert ရဖို့အတွက် ပြောတော့ ပြည်တွင်းကို ဦးစားပေးနေရလို့ပါတဲ့။ ပြည်ပအတွက် နောက်များကျရင် လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်လို့ ပြောသွားပါတယ် ။ အဲ့တော့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ detect လုပ်တဲ့ logic ကို ရေးတဲ့သူက တစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ အဲ့လူကလည်း ဒီနေ့ပွဲကို မလာလို့ ဘာမှ ရှင်းမပြနိူင်ပါဘူးတဲ့။ ( ပါရင်တောင် အဆဲခံရမှာစိုးလို့ ပုန်းနေမှာတဲ့ မShwun MI ပြောတာပဲ ဟိဟိ) ။ ဖုန်းလုပ်ငန်းရှင
By Htet Wai Aung - July 19, 2019
Music က ခေတ်ရေစီးကြောင်း အတိုင်း ပြောင်းလဲနေတယ်။ အခု နောက်ပိုင်း ( ဒီစာရေးနေတဲ့ အချိန်ကာလ ပေါ့ ) indie rock ပုံစံလေးတွေ ကြိုက်နေမိတယ်။ သူက မြူးမြူးလေးတွေ ဆိုတော့ စိတ်ကြည်နေတဲ့ အချိန် နားထောင်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ ဟိုတနေ့က Sunrise 18 ရဲ့ သီချင်း နားထောင်မိတာ ရေရေလည်လည် ကြိုက်တယ်။ သီချင်းနာမည်က ဥပါဒန် တဲ့။လွမ်းတာတောင် အမြူးလေးနဲ့ဗျ။ indie မှာ ဘာကို ကြိုက်သလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ ဂစ်တာသံ လို့ပြောရမှာပဲ။ နောက်ပြီး နားထောင်မိပြီး ကြိုက်မိတဲ့အဖွဲ့က Side Effect။ သူတို့ရဲ့ "မိုးညအိမ်မက်များ" နဲ့ "Side Effect" ဆိုတဲ့ album နှစ်ခွေမှာကို ပဲ နားထောင်ကြည့်စေချင်တယ်။ သူတို့သီချင်းတွေထဲမှာ ဖိနှိပ်မှု့တွေထဲ ကို မထေ့တထေ့ လေး သရော် ထားတာတွေကို ကြားရလိမ့်မယ်။ မိုးညအိမ်မက်များ သီချင်းဆိုရင် ဂစ်တာသံကိုက မိုးခြိမ်းသံတွေလို ကို ကြားနေရတော့တာ။
By Htet Wai Aung - July 15, 2019
Ananda ကို သူ့ router လေးနဲ့သုံးရတာ ဘက်ထရီက အဆင်မပြေ။အပြင်သယ်ရင် power bank နဲ့ တွဲပြီး သယ်နေရတာ အလုပ်ပိုရှုပ်တယ်။ ကိုယ်က တနေကုန် အိမ် မကပ်တဲ့သူမို့ အရဲစွန့်ပြီး xiaomi ကထုတ်တဲ့ zmi router လေးဝယ်ပြီး သုံးမယ် လုပ်တာ no network ပဲ ပြလို့ စိတ်ညစ်ပြီး ချောင်ထိုးထားတာ။ ကနေ့ စိတ်ကူးပေါက်လို့ router firmware ကို upgrade လုပ်လိုက်တာ။ အိုကေ စိုပြေ သွားပြီ။ Ananda ရဲ့ mifi router battery က 2050mAh ပါတယ်။ zmi က 7800 mAh ပါတယ်။ ၄ ဆ လောက် ကွာတယ်။ zmi ကျတော့ သူ့ router app ထဲကနေ setting တွေထိန်းလို့ ပြင်လို့ရတော့ browser ကို သွားနေစရာမလိုဘူး။ ဖုန်းမှာလည်း status bar မှာ noti လေးနဲ့ပြပေးတယ်။ အားပြည့်နီးပါးကနေ သုံးရင် သူ့ battery က နာရီသုံးဆယ်ကျော်လောက် အေးဆေးပဲ။Speed ကလည်း MPT ရော Telenor ရော သုံးကြည့်တာ 30Mbps လောက်ကောင်းကောင်းရတယ်။ Telecom ဘက်က bandwidth တင်ပေးရင် အဲ့ထက်ပိုရလောက်မယ်ထင်တယ် ။ အားသွင်းရင်တော့ 1A နဲ့ သွင်းရတာဆိုတော့ ၆ နာရီလောက်တော့ သွင်းရတယ်။ #xiaomi #zmi #ananda #livemore
By Htet Wai Aung - July 01, 2019
Airdot မဟုတ်ရင်တောင် bluetooth နားကြပ် ဝယ်မလို့ လုပ်နေတာကို redmi လေး ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရတော့ ဝယ်ဖြစ်သွားတယ်။ အစက နားထဲကနေ ပြုတ်ကျမှာ ကြောက်နေတာ တကယ်တပ်လိုက်တော့ တော်တော်နဲ့ ပြုတ်မကျဘူး။ အသံကွာလတီကလည်း ပေးရတာနဲ့ တန်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတယ်။ ဒီဇိုင်းကလည်း ရိုးရိုးလေးပဲ။ LED မီးလေးတွေကအစ သေးသေးလေးတွေ။ တချို့ airdot တွေလို အဝေးကနေ LED မီးကြီးကို မြင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ် ကြိုက်တာက Charging ဘူးထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ ပါဝါပိတ်သွားတာနဲ့ ဘူးထဲက ထုတ်လိုက်တာနဲ့ ပါဝါဖွင့်ပြီးသား ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာ။ Battery life တော့ မစမ်းရသေးဘူး။ အရင် Remax RBS5 တုန်းကလို device2ခု ပြိုင်တူ ချိတ်လို့လည်း မရသေးဘူး။ အဲ့ကောင်တုန်းက iPad နဲ့ ချိတ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်း android ဖုန်းကနေ ဖုန်းလာရင် နားကြပ်ကနေ ဖုန်းကိုင်ပြီး ပြောလို့ရတယ်။ device ၂ ခုလုံးနဲ့ ချိတ်ထားတော့ အေးဆေးပဲ။ အလုပ်မရှုပ်ဘူးပေါ့။ အင်တာနက်မှာ ရှာဖတ်တော့ device2ခုနဲ့ ချိတ်လို့မရပါဘူးတဲ့။ နောက်ပြီး airdots တွေက IPX4 waterproof ပါတဲ့(charging case ကတော့ မရပါဘူး)။ Mic ကလည်း အသံအကျယ်ကြီး အော်ပြောစရာမလိုပဲ အေးဆေးပြောယုံနဲ့ ဟိုဘက်
ပြည်ထောင်စု Vs Myanmar3
၁.) Myanmar3 နဲ့ Pyidaungsu ဘာကွာသလဲ ပုံကိုကြည့်ပါ။ ၂.) ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းရတာလဲ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်နေလို့ အတိအကျမသိပါ။ Myanmar3 မှာရှိနေတဲ့ အမှားတစ်ချို့ကို Pyidaungsu မှာ ပြင်ထားပြီး တိုင်းရင်းသား စာလုံးတွေ Pyidaungsu မှာ ပိုစုံလို့ဖြစ်တယ် လို့ပဲ အလွယ် မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဟို ISO နဲ့ပိုကိုက်လို့ ဒီ ISO နဲ့ပိုကိုက်လို့ ဆိုတာကတော့ ရိုးရိုး User မပြောနဲ့ ကျွန်တော်တောင် စိတ်မဝင်စားပါ။ ၃.) ဘယ်လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်ရမလဲ အရင် Myanmar3 ရိုက်နေတဲ့ လက်ကွက်ပဲ ဆက်သုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Windows 8.1 တို့ Windows 10 တို့မှာ တစ်ခါတည်းပါတဲ့ လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ လက်ကွက် ထပ်ထည့်စရာ မလိုပါ။ Windows7ဆိုရင် Windows ကိုသာ Upgrade လုပ်လိုက်ပါ။ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Windows7ပေါ်မှာ Keymagic သုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ် (စမ်းမကြည့်ဖူးပါ၊ မူသဘောအရ မရစရာ မရှိလို့ ရနိုင်တယ်ပြောတာပါ)။ ၄.) Pyidaungsu ထည့်ထားတယ် ရိုက်ကြည့်တာ မမှန်ဘူး ဖွန့်က Pyidaungsu ဖြစ်နေပြီး လက်ကွက်က ဇော်ဂျီလက်ကွက် ဖြစ်နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စက်တစ်လုံးထဲမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ် (Myanmar3 ရော Pyidaungsu ပါ ယူနီကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်) တွဲသုံးတယ် ဆိုတာ ဒီအ